नेहाका पूर्वप्रेमी भन्छन् ‘उनको आँशु’ले मलाई अझै पिरलिरहेको छ’ (हेर्नुहोस्) – Wow Sansar
January 20, 2021 104
भारतिय चर्चित गायिका हुन् नेहा कक्कड । बिभिन्न गित गाएर च’र्चा बटुल्न सफल भए’की ने’हालाई मन नपराउने सायद कम होलान् ।आफ्ना हरेक दु’खलाई पार गरेर नेहा अहिले आफ्नो करीय’र तर्फ लागेकी छिन् ।
आखमारे गि’तबाट हिट भएकी नेहा गित गाउदा गाउदै स्टेज’मानै रोएकी थिइन् । लामो समय देखि हिमाम्स कोहिसल सँग प्रेममा रहेकी उनि जब धोका पाएपछि आफुलाई एक्लो मह’सुश गर्दै आएकी थिइन् ।
लण्डन ठुमकदा, ल’ड्की ब्यूटीफुल, कर गई चुल, काला चश्मा, जचदा ऐ, जस्ता चर्चित गीतमा आफ्नो आवाज दिने नेहा कक्कड ३१ वर्ष पुरा भएकी छिन् । जब उनले धो’का दिएपछि नेहाले सामा’जिक संजाल मार्फत भि’डियो शेयर गरेकी थिइन् ।
लामो समय देखि प्रे’ममा रहेका यि दुबै एक्कासी अलग भएपछि फ्यानहरु पनि निरास भएका थिए । हालै भने नेहाका पूर्वप्रे’मी हिमांशले बम्बे टाइम्ससँ’गको अन्तर्वार्तामा केहि कुरा खुलाएका छन् ।
उनले भनेका छन् उनलाई धो’का दिनु यो मेरो जीन्दगीको सबैभन्दा नराम्रो ‘क्षण भोगेको छु’ हिमांशले सामा’जिक सञ्जालमा केही लेख्न चाहेर पनि लेख्न नसकेको बताए । नेहा र आफु बिच सहम’तिमै ब्रे’कअप भएको पनि कुरा खुलाए ।
उनले मुस्कुराउदै भने ‘हामी सहमतिमै छुट्टीए’का हौँ, म उसलाई अझै पनि ‘माया र इज्जत’ गर्छु । जब हामि दुबैको ब्रेक अप भयो तब नेहाले सा’माजिक संजन’ल मार्फत अनेक स्टा’टस पोष्ट गरेकै कारण त्यसको सजाए आज सम्म मैले भोग्दै आएको छु ।
Prevयी युवती हरेक रात आफ्नो सर्पसँगै सुत्थिन् तर.. एकदिन डाक्टरले खोले भयानक सत्य
Nextकुन भागमा टाउको दुख्नु के रोगको संकेत ? हुनसक्छ खतराको घन्टी !
प्र्यांक गर्न गएका यी युवाको भयो रामधुलाई
नेपाली चेली र घनाका युवक ‘डेनिस’ को अनौठो मायाप्रेम (भि’डियो सहित)
श्वेता र बिजेन्द्रबिचको यस्तो हर्कत गरेको टिकटक भाइरल (6876)
कञ्चनपुरकी यी युवतीले फेसबुकबाट केटासँग लब गर्दा काेठामा लगेर घीनलाग्दाे हर्कत गरी बनाईदिए यस्ताे बिजाेग.. (1030)